Ixhala kunye noloyiko - Umahluko omkhulu | Bezzia
USusana godoy | 19/06/2022 18:00 | Psicología
Nangona kwezinye iimeko zihamba ngesandla, uthotho lwe umahluko phakathi kokuxhalaba kunye noloyiko. Kuba zombini azifani kwaye lixesha lokuba kuqalwe ukuqonda xa kufuneka bohlulwe. Kodwa zisenokukhokelela ekubhidekeni okukhulu ngokuphathelele iimvakalelo. Ngaba uyayazi indlela yokuzahlula?
Ukuba sicinga ngayo, inzima, ewe. Kuba kuzo zombini ezi meko loo mvakalelo yonxunguphalo inokubakho kuloyiko nakwixhala. Kodwa asizukuzithatha njengempendulo efanayo, kuba zininzi iinkcukacha ezahlulayo. Ke, fumana ngezantsi ngayo yonke into esinayo kuwe.
1 Izinto ezivuselela ukuxhalaba kunye noloyiko zahlukile
2 Indlela abasabela ngayo
3 Imbonakalo nganye kuzo
4 Umzuzu wokuvela kwayo
5 indlela abaphathwa ngayo
Izinto ezivuselela ukuxhalaba kunye noloyiko zahlukile
Oko kukuthi, xa siziva sixhalabile siya kukwenza oko ngenxa yeemeko ezingenanto yakwenza noloyiko. Ngoko zenzeka kwiindawo ezahlukeneyo. Ukuze kucace kwasekuqaleni, kufuneka kuthiwe uloyiko lubonakala kumhla wethu xa kukho ingozi ebiya kubangela ukuba ubomi bethu bube sengozini enkulu. Ukuba ubona ihlosi libaleka lisiza kuwe, uya kuziva usoyika okanye uphakuzele kodwa ungaxhalabi. Ekubeni siziva oku njengesisongelo, njengento enokuthi yenzeke kodwa akukenzeki, kodwa wathi isoyikiso ayifaki naluphi na uhlobo lwengozi ebomini. Nangona maxa wambi kusenokubonakala kunjalo, kuba kuyinyaniso ukuba ukuba nexhala kusizisela uthotho lweempawu ezibonakala ziyingozi kuthi kodwa ezisikhusela ngokwenene.
Indlela abasabela ngayo
Ngoku siyazi ukuba imvelaphi yazo zombini ayifani, ngoko ke impendulo yokuziva nayo ayifani.. Ngenxa yokuba xa sisoyika, isenzo sokuqala somzimba kukubaleka, ukukhala, ngamanye amaxesha sihlale sibuhlungu, njl. Kodwa ngokuxhalaba, akuncedi ukubaleka ukuba ingqondo yethu ikholelwa ukuba kukho ingxaki enkulu. Ke ngoko, kufuneka sijonge loo ngxaki evelisa iingcinga ezimbi kwaye ibe yinjini yobomi bethu. Ngoko ke, iimpendulo zahluke ngokupheleleyo.
Imbonakalo nganye kuzo
Kukho abantu abaninzi abangakwaziyo ukuyiphepha inkangeleko yobuso babo xa kukho into ebakhathazayo okanye xa bethanda. Oko kuthetha ukuba ngezijekulo baya kuqaphela ukuba bakhululekile okanye akunjalo. Ngoko, ukuba umntu uyoyika, sicace gca ukuba kuya kubonakala ebusweni babo. Kungenxa yokuba eli binzana lisisiseko kwaye linjalo, liyaziwa. Kuthiwa yeyomhlaba wonke kuba kulo lonke ihlabathi wonke umntu uya kubonisa loo mazwi ngaphandle kokukhetha. Kodwa ngeli xesha kukho ixhala, akukho ntetho inxulumene nayo.
Umzuzu wokuvela kwayo
Xa sinoloyiko kungenxa yokuba imalunga nokusabela ngokukhawuleza kwesoyikiso esinaso phambi kwethu. Kodwa ixhala aliveli ngequbuliso kuba sijongene nesisongelo. Ngaphezu koko, kuthiwa ukuxhalaba ngokuqhelekileyo kuza emva kwexesha lokuqokelela iingxaki okanye iimvakalelo. Nangona iya kubonakala xa sizixhalabisa ngakumbi ngekamva nangezinto ezingekenzeki. Ngoko, njengoko sibona, amaxesha apho enye imvakalelo inokuvela kwaye enye sele ihluke.
indlela abaphathwa ngayo
Unyango lwexhala kunye noloyiko lukwahlukile. Ngenxa yokuba kwimeko yoloyiko, inokuziswa kuphela kunyango xa sithetha nge-phobias ekhusela ubomi bethu obuqhelekileyo. Ngelixa xa sikhankanya ukuxhalaba, njengomthetho jikelele kuya kufuneka ube nonyango lwengqondo kunye nonyango lwengqondo, apho Uluhlu lweendlela zobugcisa luya kunikwa ukusetyenziswa kwaye uzame ukulawula iimvakalelo kunye nezo ngcinga loo nto yenza ubomi bakho buphantse bangabi nakwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Umahluko phakathi kwexhala kunye noloyiko
Ukutshisa ilanga kweze kunye neenzuzo zayo eziphambili